Philips Hair Dryer HP8232/00 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Hair Dryer HP8232/00
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Warranty:2Years Protect your hair while enjoying fast drying results. This hair dryer has multiple speed and temperature settings. Features ThermoProtect for fast drying ataconstant caring... [Learn more]
Brand: PHILIPSFilter by: HCAK, personal care
ခေါင်းလျှော်ပြီးစအချိန်မှာ ရှည်လျားလှပတဲ့ ဆံနွယ်ဆံသားတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲ အမြန်ခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် Hair Dryer ဖြစ်ပါတယ်။ ThermoProtect အပူချိန်စနစ်က အကောင်းဆုံး ခြောက်သွေ့မှုအပူချိန်အနေအထားကို ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်သလို ဆံနွယ်တွေကို အပူအလွန်အကျွံပေးမိတာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်တဲ့အရှိန်က ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ရှိနေပေမဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ပျက်စီးမသွားစေဘဲ အကောင်းဆုံးခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hair Dryer ရဲ့ ပါဝါက 2200W အထိရှိတာကြောင့် ဆံသားပညာရှင်တွေအသုံးပြုတဲ့ Professional Hair Dryer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ထူထဲရှည်လျားတဲ့ ဆံကေသာပိုင်ရှင်တွေအတွက် Hair Dryer ရဲ့ အားကောင်းတဲ့ ပါဝါနဲ့အမြန်နှုန်းကို ပေါင်းစပ် အသုံးချကာ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dryer တစ်လုံးဟာ ဆံနွယ်တွေကို အပူပေးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပေးရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ခြောက်သွေ့ပြီး စတိုင်ကျလှပတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ရရှိဖို့ အဆုံးသတ်မှာ လေအေးလေးနဲ့ အသုံးပြုပေးရပါတယ်။ ဒီ Hair Dryer မှာပါဝင်တဲ့ Cool Shot ခလုတ်က အားကောင်းတဲ့ လေအေးတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို အလှပဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dryer ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Air Filter က ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အတွက် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကပ်ငြိလာမဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်တာကြောင့် Hair Dryer က အမြဲတမ်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။